2. 3 "Hutano" Zvekudya Kumira Kudya Nhasi! (mushumo mutsva)
Zvinoshamisa kuti kubvira zvakadanwa kuti "hutano" chikafu chakaunzwa pamusoro pemakumi maviri emakore apfuura, maAmerican varwara uye vakora kupfuura nakare kose. Nei izvi? Pane chimwe chinhu chiri kuitika iwe chausingazive nezvacho? Mavhiki mashoma apfuura shamwari yedu Yuri Elkaim, anova nyanzvi mune zvehutano akasarudza kuita tsvakiridzo pane izvi zvinonzi chikafu chehutano. Akatanga kufukura chokwadi. Zvaakawana zvakashamisa zvikuru !! Zvakawanda zvekutsvagirisa zvaakawana takatozviziva zvisinei kuti akawana rumwe ruzivo rutsva rwakamushamisa. Mune ino inonakidza yemahara Hutano mushumo, Yuri anoratidza izvo zvitatu "zvehutano" zvekudya zvaunofanirwa kurega kudya kubva nhasi!
3 Health Foods kuGumira Kudya <———- kurodha mahara (PDF)
Uyu mushumo wehutano wakasununguka unoitwawo naYuri Elkaim. Mune uyu MHURI mushumo, anotaura nezve 5 detox scams yekudzivirira. Chirevo ichi chinotaura nezve:
5 Detox Dambudziko Rokudzivisa <———- kurodha mahara (PDF)